Jilaayaasha aan Dowliga ahayn oo ku baaqay in la joojiyo caburinta Xildhibaannada – Kalfadhi
Jilaayaasha aan Dowliga ahayn oo ku baaqay in la joojiyo caburinta Xildhibaannada
Guddoomiyaha Daladda Jilaayaasha aan Dowliga ahayn ee SOSCENSA, Diini Maxamed Diini, ayaa meel fagaara ah ka sheegay ineysan Ciidanka Xukumadda Soomaaliya ilaalin Xasaanadda Xildhibaanka, “taasoo ka timid” buu yiri “caburin lagu haayo Xildhibaannada Baarlamaanka Soomaaliya. Diini waxa uu sheegay in xadgudubyada uu ka hadlayo qaarkood uu isagu indhaha ka qaaday.
“Waxan goobjoog u noqday Xildhibaan Qaran, oo askari Ciidanka Dowladda ah qori la hor taagan yahay, waana arrin aan wanaagsanayn oo aan loo baahneyn xiligaan. Waxaa fiican in la ilaaliyo Xasaanadda Xildhibaanka” ayuu yiri Diini. Waxa uu sheegay in cidda loo adeegsanayo xayiraadda Xildhibaannada ay tahay Laamaha Amniga Dowladda, sida uu hadalka u dhigay.
Diini waxaa, isaga oo maanta ka hadlayey madal lagu qabtay Muqdisho oo uu abaabulkeeda qeyb ka ahaa, uu sheegay iney tahay wax aad looga naxo in 2018 lala hor taagan yahay qori Xildhibaan Qaran oo ka tirsan Baarlamaanka Soomaaliya. “Waxay ahayd” buu yiri “in la gaaro biseyl siyaasadeed”. Sida uu hadalka u dhigay, “ma ahayn” buu yiri “in Xildhibaannada la caburiyo”.
Guddoomiye Diini waxa uu sheegay in, maadaama uu hogaan u yahay dalad ay ku bahoobeen Bulshada Rayidka, uu xog ogaal u yahay arrimo badan oo bulsho. Wasaaradda Amniga ayuu si gaara u carrab dhabay, waxa uuna sheegay iney iyadu abaabusho caburinta dadka, sida uu hadalka u dhigay. “Wasaaradda Amnigu waxa ay amartay hoteelada iyo xarumaha daabacadaha in aysan wax ka qaban karin shirarka lagu mucaaradayo dowladda” ayuu yiri Diini.
Intaas waxa uu raaciyey in heerka caburinta ka jirta Muqdisho ay gaartay inaan la daabici karin boorar aysan wax ka ogeen Laamaha Amniga, taas oo uu ku tilmaamay caburin. Waxa uu baaq u diray Wasaaradda Amniga, isagoo oranaya “Wasaaradda Amniga waa in ay dhowrtaa Dastuurka iyo Qawaaniinta uu leeyahay dalka”. Waxa uu sidoo kale la hadlay Xukumadda. “Dowladda Soomaaliya waa in ay badashaa dhaqanka ku dhisan caburinta iyo cadaadinta Xildhibaannada Golaha Shacabka, si loo ilaaliyo Madax-banaanida Xildhibaannada” ayuu yiri Diini Maxamed Diini.
Waxa uu Guddoomiyaha SOSCENSA, Diini Maxamed Diini, ugu baaqay in la joojiyo dhamaan wax kasta oo keenaya in la caburiyo fikirka, sida uu hadalka u dhigay. “Haddii aan la hadlin, oo aan la kala fikir duwanaan, waxaa furmayaa dhinac kale oo aysan dalka dan ugu jirin” ayuu yiri Guddoomiye Diini Maxamed Diini.
Xildhibaan ugu baaqay Xildhibaannada iney Mooshin ka keenaan Guddoonka Golaha Shacabka
Xildhibaan Geesey oo Xilkii Wasiirnimo iska casilay maanta